Ny zavatra niainako rehefa nampiasa Google Earth for Cadastre - Geofumadas
Desambra, 2017 AutoCAD-Autodesk, cadastre, Google Earth / Maps
Matetika aho no mahita ireo fanontaniana mitovy amin'ny teny fanalahidy izay ahatongavan'ny mpampiasa ao Geofumadas avy amin'ny motera fikarohana Google.
Afaka misoratra anarana amin'ny Google Earth ve aho?
Manao ahoana marina ny sary ao amin'ny Google Earth?
Nahoana no nafindra toerana ny fanadihadiana mikasika ny Google Earth?
Fony tsy mbola miteraka fatiantoka ho ahy ny zavatra ho vakio ato amin'ity lahatsoratra ity, dia aoka aho nataony tao manodidina ny traikefa tsy maintsy haka cadastral fanadihadiana ao amin'ny tetikasa izay sarobidy indrindra izany modelim fiovan'ny valin'ny fikarohana fa miraiki-po fomba fiasa sy ny protocols traditionalists.
Rehefa norefesiko ny fiovaovan'ny dikan'ilay hoe orthophoto ho an'ireo tanàna 25 nitaky ny fanadihadiana dia tsapako fa misy zavatra tsy mifamoto:
-Ny fotoana efa nandefasana ny sidina, satria ny tany dia tropikaly ary misy fotoana tsara indrindra alohan'ilay hoe ny rahona, ny setroka ary ny toetr'andro,
Izy ireo taona maro izay ny zanabolana sary nividy ny Manary Tsy safidy amin'ny accuracies izay efa natolotra,
-Ny andrim-panjakana izay nanome fahazoan-dàlana hanidina dia efa antitra, nitady vola an-tapitrisany (eo ambony latabatra, mazava ho azy), noho ny fanaparitahana ny tanàna tsirairay. Ankoatr'izay, ny fiaramanidina dia nanome ahy vola fanampiny noho ny fitadiavam-bola izay nolazain'ny andrim-panjakana fa izy irery no afaka nanara-maso ireo sidina ireo.
- Ny vola azony dia tsy nahavita nanamboatra orthophoto tsara, fa fikomiana kely ihany.
- Raha mbola nanana ny vola aho, nanao ny fotoana orthophoto nitazona fotoana izay tsy nahazoana vokatra talohan'ny datin'ny fankatoavana ny soatoavina kadastrale amin'ny fiovan'ny dimy taona.
Rehefa nandinika ny valim-pikarohana notadiavin'ny tetikasa aho dia nahatsapa fa ny fomba fanelingelenana mampiasa maodely cadastre iraisana dia zava-dehibe kokoa noho ny marina. Zava-dehibe kokoa ny fampisehoana ny maodely marobe noho ny kalitao faran'izay tsara amin'ny fomba ara-dalàna tsotra. Ka naleoko nanaiky ny fanesoana sy ny fitadiavana valiny vetivety.
Miorina amin'ny zavatra niainana io lahatsoratra io, toy ny fomba fiasa teknika sy fahatsiarovan-tena fa tsy resahin'ny ody; na dia nanao tsindraindray aza aho dia nampiasa ohatra tamin'ny kaominina iray, izay tsy maintsy ekeko fa ny «choros soup»Mamerina ny fahatsiarovana izay mamela ny toe-javatra ara-jeomatic tanteraka.
Sary manana ny mari-pahaizana Google Earth (Relative).
Andao jerena ny sary santionany. Amin'ny haavon'ny fandrakofana mitohy, dia azo jerena fa ny fanadihadiana izay nataontsika tamina gara iray manontolo ary namboarina tamin'ny geodetic gps, dia mifanentana tsara amin'ny sary nisy talohan'ny 2013. Mazava ho azy, noho izany, nilaina ny nisintona ny sary hanaovana azy hihaza amin'ireo teboka. fifehezana izay nobeazinay. Amin'ity tranga ity, ny famindra toerana (an'ny sary, fa tsy ny fanadihadiana) dia tokony ho 11 metatra atsinanana andrefana.
Ny sary Google Earth dia mila ovaina raha oharina amin'ny fanadihadiana marina. Vantany vao vita io dia mampiseho tsy fitoviana ny sary.
Ireo sary eto an-tany Google Earth dia tsy manana fepetra tsy misy fepetra.
Mitohy amin'ny ohatra iray ihany, hitantsika fa ny sary namboarin'i Google Earth ao amin'ny 2013 dia manana fifindra hafa noho ny teo aloha. Ny fatorana eo anelanelan'ny sary dia manana tsimok'aretina tsara vita, tsy dia hita loatra ny tsy fetezana; ao izany no toetry ny lalana, dia jereo fa tahaka ny any amin'ny fanapahana lalana dia tsy miharihary toy ny hoe hazo fijaliana, fa ny tsara ny fitroarana Azo jerena ho toy ny renirano tsy mifanojo amin'ny fanandratako; Na dia mety ho niova aza ny lalana, izay mahalala fa mahafantatra fa misy rindrina mihazona eo amin'ilay tetezana izay tsy niova nandritra ny taona.
Noho izany, ny fampiasana an'io sary izay vao haingana kokoa io dia midika asa mitovy amin'ilay taloha ihany; fantaro ireo teboka azo fantarina ary ampifandraiso amin'izy ireo amin'ny teboka fanaraha-maso eny an-tsaha, ary avy eo afindrao ny sary amin'ny alàlan'ny vector, izay mazava fa tsy mitovy amin'ny an'ny sary iray hafa. Ny fomba fanao dia nanjary vahaolana mahaliana, izay ny sary Google Earth dia resahina manoloana ny lesoka natao tamin'ny toby fitobiana, toy ny fahaverezan'ny mason-koditra, ny fahitana ilain'ny ekipa calibré, ny fanamarinana ireo quadrants cadastral izay mankatoa fizarazarana mifototra amin'ny degre, minitra ary segondra marina, ary izay tsy holazaina ho porofon'ny sari-tany misy habe telo mampiseho ny tsy fitovizan'ny sanda cadastral izay naloina ho an'ny tany sy trano. Ireo zavatra ireo, raha tsy misy sary na loharano tsotra amin'ny fampiasana programa CAD / GIS dia saika tsy azo atao mihitsy.
Ny fototry ny sarin'ny Google Earth dia sombin-tsarimihetsika maromaro nandritra ny taona samihafa, miaraka amin'ny loharano samihafa ary miaraka amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny toeran'ny toerana misy azy.
Ny fahamaroana ara-dalàna eo amin'ny Google Earth dia marina.
Avelao ny olan'ny sary, ny toetran'ny spheroid ampiasain'ny Google Earth dia marina raha ny fanadihadiana no jerena momba azy. Ao amin'ny sary etsy ambony, rehefa mampiseho ny fandrindrana UTM ao amin'ny Google Earth, amin'ny rakitra anaovako fanadihadiana izay nakariko ho kml, ny marin'ilay fandrindrana dia tsy misy resaka momba ny Datum WGS84, satria angona matematika izany.
Teo afovoan'ny Tetikasa, ireo gurus an'ny andrim-panjakana dia nandalo niaraka tamin'ny fitaovana tena marina tsara. Nolazainay tamin'izy ireo fa afaka mampiasa ny fanadihadianay ho fanohanana izy ireo, satria izy ireo dia fananana georeferencing ho an'ny tetikasa titling on demand. Sarotra ny namoaka bika tamin'ny tendako rehefa nanala baraka ny iray tamin'ireo zazalahy cadastre izy ireo, nilaza taminy fa tsy misy ilana azy ny fampiakarana azy.
Ny tombotsoan'ny Google Earth ho an'ny cadastre dia ny tombony ho fanohanana anao
Ny zava-misy dia ny fahazoana ny fanapahan-kevitra teo aloha hanome ny Google Earth fampiasana sy fahamendrehana mendrika azy. Toy ny fitaovana hafa rehetra ampiasaina amin'ny tetikasa, Google Earth dia iray hafa.
Google Earth dia tsy azo tsinontsinoavina noho ny fampiasana sary izay tsy misy, fa tsy amin'ny herintaona fotsiny, fa koa amin'ny daty ara-tantara hafa. Tadidiko ny fivoriana izay nandraisan'ny ben'ny tanàna anjara ny valiny: «Google Earth has uVahaolana mora hitazonana ny sarin'ny tanàna iray manontolo, izay tsy mbola nanolotra anay na orinasam-panjakana na oviana na oviana«. Rehefa nanontanian'ny guru iray avy amin'ny Land Registry XNUMX taona fa ratsy ny marimarina, voarakitra ao amin'ny lahatsariko ny teniny: «Ireo lehilahy ireo dia namaha izany, raha manana tolo-kevitra tsara ianao, soraty izany ary hodinihintsika izany".
Ny tsy tokony hohadinointsika dia ireo mitantana mitaky fitaovana mora hanehoana ny valiny amin'ny ambaratonga afovoany. Misy olona izay tsy handeha mankeny an-tsaha mihitsy, ary mila fampisehoana an-tsary izay tsy azo soloina ny Google Earth tamin'izany fotoana izany. Ny fanokafana kml na serivisy WMS ary aseho azy ireo fa misy ny fananan'ny tanàn-dehibe sy ny ambanivohitra ny tanàna, miaraka amin'ny maodelin'ny terrain niomerika sy ireo tranobe misy ny haavony miankina amin'ny taloha sy aorian'ny fidiran'ny tetikasa ... dia traikefa sarobidy. Tsy mahalala ny marina izy ireo, tsy mahalala ny fomba fanarahanay ny fomba, fa faly mahita ny valin'ny sary ary mankasitraka ny fanapahana ny tavoahangy fitantanana na ny takiana fitaterana pejy maro tsy mitombina.
Ny fandefasana ireo sary avy amin'ny Google Earth dia zavatra mpandrafitra. Ny sandan'ny tetikasa dia tao amin'ny fitantanana iraisana; Tsy nila nividy GPS na millimeter manontolo ny isam-pokontany. Iray isaky ny vondrom-piarahamonina dia ampy, ary manohy manao izany izy ireo satria nifandimby nandritra ny taona fotsiny izy ireo hanaraka ny fanadihadiana na hanavao ireo loharanom-pahalalana vitany isan-taona ho famatsiam-bola indray ny vola azo sy ny topografika amin'ny tetik'asa lalam-pirenena na rafitra. hydrosanitary.
Ny fanoherana ny safidinao amin'ny fampiasana ny Google Earth ho referansa dia ny ady amin'ny rindrina fotsiny. Ireo izay lasa nanolotra serivisy cadastral ho an'ny tanàna amin'ity toe-javatra ity dia hilaza amiko fa izao ny tanàna dia tsy te-handoa asa tena marina, fa ho an'ny serivisy hampiofanana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny fampiasana loharanom-pahalalana kely sy torohevitra mba hanapahan-kevitra. marina.
Ary avy eo ...
Taorian'izay taona rehetra izay dia tokony hiaiky aho fa nisy ny lesoka nataoko, ary hanoratako lahatsoratra lehibe kokoa noho ity iray ity. Tiako ho matotra kokoa ny rindrambaiko maimaimpoana, amin'izay dia hitahiry vola be izahay; na hoe ny ny sarintany ary cadastre ho an'ny tanjona nanana diffusion bebe kokoa, satria mety ho kely ny vidiko raha hanazava ireo fomba fanao izay efa nampiharintsika nanomboka teo. Fa ny valiny anio dia tiako horesahina:
Ny modely cadastre mifototra amin'ny fitantanana iombonana eo an-tanàna dia any, amin'ny fananganana orinasa hafa, fa tsy noho ny fanavaozana fa noho ny lesona noraisina.
Raha tokony hanao cadastre amin'ny tanàna 25, ny traikefa no nitarika azy tamin'ny 89. Mba hanararaotana ny toekarena amin'ny ambaratonga fitantanana iraisana, ary mazava ho azy, mampiasa ny sary Google Earth ho fanohanana.
Zava-baovao ao an-toerana sy ny loharanon-karena ara-toekarena olona mifanitsy avy aiza ny hafa tsy mety mitady nitondra mba hampisehoana fa vola dolara rehetra ny kaominina, sitrana amin'ny latsaky ny roa taona, ary inenina maro ao amin'ny fidiram-bola nandritra ny 10 taona.
Ny tanàna izay nahatratra ny fitaterana feno ny faritaniny, dia manatsara ny fampiasana ny loharanom-bola azo avy amin'ny faritra manontolo amin'izao fotoana izao, ary manova ny metadata amin'ny fahamarinam-pitondran-tena sy ny kalitao ary ny geometry.
Saika tamin'ny fiafaran'ny tetik'asa dia nihaona tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny andrim-panjakana indray aho, izay nanamarina ny olana sasany nanjo azy ireo, izay efa namoahan'izy ireo anarana sy niditra tamin'ny rafitra nasionaly. Voalohany, niaraka tamin'ny feon'ny manam-pahefana, nilaza taminay izy ireo fa tokony hanome ireo sari-tany natsangana. Rehefa nomenay adiresy hisintomana amin'ny alàlan'ny WFS izy ireo dia navelany ho toy ny vahiny izahay, dia naneho azy ireo tamin'ny alàlan'ny gvSIG ny iray tamin'ireo tovolahy hitan'izy ireo ambany; Nilaza tamin'izy ireo izy fa afaka maka azy ireo avy any amin'izay ilainy. Nanova ny tarehiny ny avonavony, ary nanova ny fanaintainanay noho ny fangorahana izahay, tamin'ny fanamarihana manaraka:
Azafady, Don Golgi, izay tena iriantsika dia ny hanomezanao antsika ireo sary nalefanao tamin'ny Google Earth.
Fomba hafa hamerenana sary avy amin'ny Google Earth: CAD-Tany y Plex-Tany. Manoro hevitra ny roa aho.
Previous Post«Previous Jereo ny fandrindrana Google Earth ao Excel - ary avadiho ho UTM
Next Post Tokony hanolo ny teny hoe "Geomatics" ve isika?manaraka »
Valiny iray ho an'ny "Ny zavatra niainako rehefa nampiasa ny Google Earth ho an'ny Cadastre"
José Agustín Wilches Gómez hoy izy:
Fomba fiasa mahaliana ho an'ny cadastre fiscal, na saritany tenencial. Tsy heveriko fa mihatra amin'ny cadastres maromaro na tanjona marobe.